Turkiga oo Warkii ugu cuslaa ka soo saartay Canaantii Hore loo Arag. - Allbanaadir Media
Home Warka Maanta Turkiga oo Warkii ugu cuslaa ka soo saartay Canaantii Hore loo Arag.
Wasaaradda arrimaha dibedda ee Turkiga ayaa Arbacadii ku dhawaaqday inay ka walaacsan tahay is afgarad la’aan ka dhex jirta dhinacyada siyaasadda ee Soomaaliya ee ku saabsan hannaanka doorashada.
“Waxaan ka walaacsanahay in is afgarad la ‘aan ilaa iyo hada ka dhex jirta daneeyayaasha arimaha doorashooyinka Soomaaliya ay carqaladeyn karto rajada ay dadka Soomaaliyeed ka qabaan horumarka dalkooda, iyo waliba in la gaaro nabad iyo barwaaqo,” ayaa lagu yiri bayaanka.
Waxay intaas ku dartay in Turkiga uu ku casuumay DFS iyo Dowladaha Xubnaha ka ah Dowladda Federaalka (FMS) inay isu yimaadaan oo ay ku xalliyaan khilaafaadka wadahadal loo dhan yahay oo wax ku ool ah oo salka ku haya is afgaradkii la gaaray Sebtember 17, 2020.
“Waxaan xoojineynaa muhiimadda ay leedahay in doorashada la qabto iyadoo aan dib loo dhigin. Waxaan mar kale ku celineynaa taageerada aan siineyno shacabka iyo dowlada Soomaaliyeed ee saaxiibtinimada iyo walaaltinimada leh si looga gudbo ismari waaga sida ugu dhaqsiyaha badan, ”ayaa lagu yiri bayaanka.